स्वप्नदोष (नाइटफल) को उपचार के हुन्छ ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
स्वप्नदोष (नाइटफल) को उपचार के हुन्छ ?
सपना र यौन
तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले सपना र यौनका सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं । निदाइरहेका बेला एकपछि अर्को चित्र, विचार, भावना एवं संवेदना अचेतन रूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि कुनै व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन । सपना विशेष गरेर Rapid Eye Movement (REM) sleep (निद्रा) को स्थितिमा देखिन्छ । सपना विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो वा यौनसम्बन्धी । यस्तो REM को स्थितिमा यौनाङ्गमा रगत भरिन्छ र पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित अनि महिलामा योनिश्राव भएको पाइन्छ ।
प्रकाशित :असार १५, २०७४
कुरा बुझ्नु भो त
कसरी बन्छ एन्टी स्नेक भेनम ?
प्रत्येक खेलाडीको उद्देश्य पदक जित्नु हुन्छ
हस्तमैथुनले लिंग बांगो हुन्छ
अण्डकोषको समस्या र यौनसम्पर्क
हस्तमैथुनपछिको लिङ्ग पीडा यौन रोग हो आश्विन १४, २०७५
हस्तमैथुन र वीर्य स्लखन आश्विन ६, २०७५
यौनसम्पर्क र वीर्य स्खलन भाद्र २८, २०७५
मधुमेह रोग र यौनेच्छा भाद्र २१, २०७५
महिनावारी हुँदा किन पेट दुख्छ ? भाद्र १४, २०७५
श्रीमान/श्रीमतीमा असमान यौनेच्छा र समस्या भाद्र ८, २०७५
थाहै नपाई वीर्य स्खलन कस्तो समस्या हो भाद्र ३, २०७५
शीघ्र स्खलन कसरी रोक्ने श्रावण २६, २०७५
प्रजनन र यौनसम्पर्क श्रावण १७, २०७५